Usuthu luzimisele ngokuyishaya iChiefs koweDStv Premiership - Impempe
Usuthu luzimisele ngokuyishaya iChiefs koweDStv Premiership
USiphelele Magubane waMaZulu uthi bafuna amaphuzu aphelele uma sebebhekene neKaizer Chiefs ngoLwesithathu
AmaZulu FC anethuba lokubuya okungasenani namaphuzu amane eGoli njengoba ebhekene nezinkunzi zakhona kulandelana kweyeDStv Premiership.
Ngempelasonto Usuthu luhlulekile ukuthola amaphuzu aphelele ngesikhathi lubambana neSwallows FC ngo 0-0 ekuhambeni. Leli qembu alibuyanga eGoli ngoba lizobhekana neKaizer Chiefs komunye umdlalo weligi obalulekile eFNB Stadium, ngoLwesithathu ngo-5 ntambama.
IChiefs abazobhekana nayo iwadinga kakhulu amaphuzu njengoba igcine ukudlala umdlalo weligi ithelwa othulini yi-Orlando Pirates ngo 2-1. Ngemuva kwalokho kuphinde kwangahamba kahle kuMakhosi ekhishwa kwiNedbank Cup Last 32 yiqembu elidlala kwiGladAfrica Championship iRichards Bay FC ngo 2-1.
USiphelele Magubane waMaZulu uthe kubaluleke kakhulu ukuthi bathole amaphuzu aphelele uma sebebhekene neChiefs ngoLwesithathu.
“Siwulungiselele kahle umdlalo wangoLwesithathu. Kuningi okuhle esizokuthatha emdlalweni wangeSonto. Besisebenza kanzima ukulungisa amaphutha esiwenze ngeSonto, ngakho siwubheke ngabomvu umdlalo wangoLwesithathu futhi sinokuzethemba,” kusho uMagubane.
AmaZulu asendaweni yesikhombisa kwi-log kanti ukuwina kwiChiefs kungawanyusela endaweni yesithupha. Ngakolunye uhlangothi iChiefs izabalaza endaweni yesishiyagalolunye nokuchaza ukuthi iwadinga kakhulu amaphuzu ukuze inyuke kwi-log.
“Sesike saba kulesi simo phambilini (ukudlala imidlalo ekuhambeni bangabuyeli ekhaya) ngakho siyazi ukuthi kudingekani. Sinokwesekwa okukhulu okuvela emindenini yethu nabanye beqembu abasele ekhaya. Ngicabanga ukuthi umoya ekhempini muhle kakhulu. Besingathanda ukubuyela emuva anamaphuzu ayisithupha kodwa sizimisele ngokuthola amaphuzu aphelele ngoLwesithathu ukuze sibuyele emuva namaphuzu amane,” kuphetha uMagubane.
IChiefs sekunesikhathi igcinile ukudlala. NgoMgqibelo bekumele idlale umdlalo weCAF Champions neWydad Athletic Club yaseMorocco kodwa umdlalo wahlehliswa ngenxa yezingqinamba zama-visa. Kuvele ukuthi lo mdlalo ungase udlalwe ngoLwesihlanu e-Egypt kodwa iConfederation of African Football (CAF) ibingakakuqinisekisi lokhu.
Previous Previous post: Sesiphinde sagqemeka engeqiwa ntwala isibhakela kushona uMagudulela
Next Next post: Ubhashiye nencwadi yothando echiphizisa izinyembezi eKapa uKolisi